အိတ်ဖွင့်ပေးစာ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်စလင်ကျောင်းသူ/သားများ၏ ပညာရေးကိစ္စကို NDPD ပါတီမှ သမ္မတထံတင်ပြသော စာတမ်း …
ပညာရေးကိစ္စကို NDPD ပါတီမှ
This entry was posted on February 19, 2013, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
This entry was posted on February 11, 2013, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
အနောက်တံခါးသခင် သားသားလေး အာရ်ကန်သား မျိုးရိုဟင်ဂျာ‘s photo.
Hot News စာစောင်ပါ အနောက် တံခါးမှဧည့်သည်များ အခန်းဆက်ဆောင်း ပါးများသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းပြီး ဗဟုသုတရစေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဦးစွာပြောကြား လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲဘ၀င်မကျဖြစ်နေ တာလေးတွေကို ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ (၁၉.၉.၁၂)နေ့ထုတ် Hot News စာ စောင်ပါ အနောက်တံခါးမှဧည့်သည်များ (၅)နောက်ဆုံးကော်လံမှာ
“ခရစ်သက္က ရာဇ် (၁၆၆၅)ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင် ပြည်သားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူမျိုးကို မူ အာရဗ်ဘာသာဖြင့်(ရိုဟင်ဂျာ)ဟုခေါ် ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ရခိုင်ပြည် သား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အုပ်စုတို့ကို (ရိုဟင် ဂျာလူမျိုး)ဟုလည်းခေါ်တွင်လာကြပါ သည် စသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနဲ့ ပတ်သက် တဲ့အချက်တွေ ကို ရှေးယ ခင်နှစ်ပေါင်း များစွာက ပဲရှိခဲ့လေဟန် သမိုင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ ရောထွေးပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေ ရန် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် ကရိုဟင်ဂျာတို့၏ဘ၀ (၁၉၈၉) ခုနှစ် ထုတ် စာစောင် မှာ ရေးသားဖော်ပြ ခဲ့ပါတယ်”
အဲဒီအချက်တွေဟာ မှားယွင်းတယ် လို့ ကိုနိုင်ထက်ရှိန်သက်သေ သာဓက အထောက်အထားအစုံနဲ့ပြသနိုင်ပါသလား။ ကိုနိုင်ထက်ရှိန်ရဲ့ဆောင်းပါးတွေဟာ ပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ သမာသမတ်ကျတဲ့ ဆောင်းပါးမဆန်ဘဲ ပေါ်လစီဆန်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလောက်နဲ့မရဘူးဗျ။ ခေတ်အဆက်ဆက်က သတင်းမှောင်ချ ထားပြီး Brainwash ပြုလုပ်ခြင်း ခံရတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုတချို့က အဲဒီလောက် ပြောရုံနဲ့လက်ခံမှာဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံတကာ နဲ့ ယှဉ်ပြီးဆွေးနွေးငြင်းခုံကြတဲ့အခါမှာ They will not hold water လို့ပြောချင် တယ်ဗျ။နောက်ပြီး (၂၀.၉.၁၂)ခုထုတ် Hot News ရဲ့ အနောက်တံခါးမှဧည့် သည်များ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးမှာ
“မေယုဒေသ(ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဒေသ) မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ စစ်တကောင်း သားဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ ကမန်၊မြေဒူး အဆက်အနွယ် ဗမာမူဆလင် များနှင့်မတူဘဲ သီးခြားဘာသာစကား၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေထူးခြား စွာ ကွဲပြားခြားနားနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါ တယ်”
“ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ အမျိုးသီလ ကိုစောင့်ထိန်းကြသူများဖြစ်တဲ့အတွက် မူဆလင်ဘာသာဝင်များနဲ့ လက်ထပ် ထိမ်းမြားလေ့မရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့် ရခိုင် လူမျိုးများဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာဖြစ် ကြပါတယ်။မူဆလင်ဘာသာကို ကိုးကွယ် သက်ဝင်ခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက် (ရခိုင် မူ ဆလင်)ဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူး”
“တကယ်တော့ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ရှိတဲ့လူမျိုးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သော်လည်းကောင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်အဖြစ် ထင်ရှားရှိစဉ်ကသော်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာ မှမရှိခဲ့သော အမည်ဖြစ်ပါသည်။”
အဲဒါကတော့ Nothing is further than the truth. တက်တက် စင်အောင် လွဲနေ ပြီဗျ။
Dr.Francis Buchanan ရေးသား ပြီး (၁၇၉၉)ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေတဲ့ ‘A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire’ သုတေသနစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ပထမ အချက်က
’The Mohamendans settled at Arakan call the country Rovingyaw, the Persians call it Rekan.’
“ရခိုင်တွင် အခြေစိုက်နေထိုင်ကြ သော မဟာမေဒင်လူမျိုးများသည် အဆို ပါဒေသကို Rovingyaw ဟုခေါ်ဝေါ်ပြီး ပါရှန်လူမျိုးများက Rekan ဟုခေါ်ဝေါ် ကြသည်”
’ I shall now add three dialects, spoken in the Burma Empire, but evidently derived from the language of the Hindu nation.The first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga,or natives of Arakan.
“ကျွန်ုပ်ဖြည့်စွက်တင်ပြလိုသည့် ဒေသိယစကား ၃မျိုးမှာ ဗမာအင်ပါယာ အတွင်းပြောဆိုနေသော်လည်း အိန်္ဒိယ နိုင်ငံရှိဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာ သည်။ ပထမဒေသိယ ဘာသာ စကားမှာ ရခိုင်ဒေသတွင် အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့သည် မှာကြာပြီဖြစ်သည့် မိမိကိုယ်ကို Rooinga (သို့မဟုတ်)ရခိုင်သားဟုခေါ်ဝေါ်သည့် မဟာမေဒင်လူမျိုး တို့ ပြောသည့် စကား ဖြစ် သည်”
နောက်ပြီး Dr. Buchanan က အဲဒီ Rooinga တို့ရဲ့ ဘာသာစကား၊ရခိုင်ဟိန္ဒူ တို့ရဲ့ Rossawn ဘာသာစကား၊ Banga (ရခိုင်ဘင်္ဂါလီ)တို့ရဲ့ ဘာသာစကားတို့တူ ညီပုံ၊ခြားနား ပုံတွေ ကို ဇယားနဲ့တင်ပြထား သေးတယ်။ အဲဒီတော့အရေးကြီးတဲ့ အချက်များ က- (၁) ရိုဟင်ဂျာများသည် ၁၇၉၉မ တိုင်မီ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ရခိုင် ဒေသတွင် အခြေစိုက်နေ ထိုင်ခဲ့ကြ သည်။(၂) ရိုဟင်ဂျာကသတ်သတ်၊ ဘင်္ဂါလီက သတ်သတ်ဖြစ်သည်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေ သည်။ အဲဒါကြောင့် ကိုနိုင်ထက်ရှိန်ပြော တဲ့
“(ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို လူ မျိုးအမည်နဲ့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာမယ်ဆိုပါ က နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ အခါမှာ ဘာသာဗေဒသဘောအရ ပြန် လည်အစကောက်ရင် (ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုတာ (ရခိုင်ပြည်သား)ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ် လာစေရန်၊ကြို တင်ဖန်တီး ထားသော ဝေါဟာ ရဖြစ်ကြောင်းတွေ့ နိုင် ပါတယ်”
This entry was posted on January 2, 2013, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
This entry was posted on December 30, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
Photo – UNA-UK
Today, Alexandra Buskie, UNA-UK’s Responsibility to Protect Programme Officer, and Ben Donaldson, UNA-UK’s Communications and Campaigns Officer, hand-delivered more than 130 of these letters to the FCO, along withacover letter from UNA-UK Chairman Sir Jeremy Greenstock to Baroness Warsi, Minister with responsibility for the UN and Human Rights.
This entry was posted on December 14, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
မဆလအစိုးရ၏ နိုင်ငံတကာစံမမီသော ၁၉၈၂ခု နိုင်ငံသားဥပဒေဖြင့် ဖြေရှင်းနေသော အရေးကိစ္စ တင်ပြခြင်း …
ရခိုင်တို့ ၏အကြမ်းဖက်မူသည် နိုင်ငံတော်ဒီမိုကရေစီချီတက်ရေးတွင် ဟန့်တားမူပြုသောစိန်ခေါ်မူ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ကို သမ္မတကြီးနှင့် အတူ တစ်နိုင်ငံ လုံးတန်းတူရင် ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်။ သမ္မတ ကြီးဖြေရှင်းနည်း ၄သွယ်နှင့် ယခုဖြေရှင်းနေသော မဆလ၏ ၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားပေတံ ကိုကြည့်လျှင် အကြမ်းဖက်မူအပေါ် မည်သည့်အရေးယူမူများမရှိဘဲ ဒုက္ခသည်စခန်းရောက်နေသော ရိုဟင်ဂျာ၊ ရခိုင် လူမျိုးစု ၂စုမှ ရိုဟင်ဂျာကိုသာ သီးသန့်စီစစ်ခြင်းသည် အကြမ်းဖက်မူကို နိုင်ငံတော် ကဖန်တီး တာလား၊ရိုဟင်ဂျာကဖန်တီးတာလားလို့ သံသယယုံမှားနေပါသည်။
သို့ သော်သမ္မတကြီးမှ လွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာပို့ ရာတွင်ရခိုင်များက ရိုဟင်ဂျာများ၏ ပိုင်ဆိုင်မူကို လုယူရလိုခြင်းဟူ၍လည်ကောင်း၊ပြီးခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရခိုင်များကဥပဒေပါ အဆုံး အဖြတ် များကို မလိုက်နာခြင်း၊ရခိုင်အရေးကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင်မျက်နှာပျက်ပြီး အားငယ် နေ ရခြင်း စသည်ဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်ကို တွေ့ ရပါသည်။
တဖန်နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်း တစ်ဖက်တွင် ရခိုင်ဟူသောအမည်ကိုတန်ဖိုးထားပြီး 12-8-2012 တွင်ရခိုင်သူပုန်များသည် ကျောက်တော်သို့ဝင် လာပြီး14-8-2012တွင်ရခိုင်သမ္မတနိုင်ငံ ကြေငြာရေးစီ မံရာတွင် လုံခြုံရေးတပ်နှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ လာပြီး လက်နက်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြောင်း
တောင် ကုတ် ၁၀ လောင်းပြိုင်သတ်ဖြတ်ခဲ့သော အရေးနှင့်စုံစမ်းရေးအဖွဲ့မှ ရခိုင် (၃၀)အားဖမ်းဆီးပြီး အမူထင်ရှားလာသောအခါ ၎င်းထဲတွင် RNDP ပါတီဝင်များဖြစ်၍ ထိန်ချန်ထားခြင်း၊ ပြီးခဲ့သောအပတ်တွင် ဘင်္ဂလားရခိုင်သူပုန်မှ ရဲဘော် (၁၈) ဦးက တာလီဘန်သူပုန်ပုံစံဝတ်စား ဆင် ယင်ပြီး မောင်းတောမှတစ်ဆင့် လုံခြုံရေးတပ် အားတိုက်ခိုက်မူတွင် လိုက်လံဖမ်းဆီး၍ စစ်ဆေးသော အ ခါအားလုံးမှာ ရခိုင်သူပုန်သာဖြစ်သည်ကို ထိန်ချန်ထားခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မူကို ရခိုင် သူပုန် များနှင့်အတူ RNDP ပါတီဝင်များလည်းပါဝင်ကျူးလွန်မိပါကြောင်း RNDP ပါတီမှ အတွင်းရေးမူးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးမှူးများက စာနယ်ဇင်းများကိုဝန်ခံခဲ့ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေသော ရိုဟင်ဂျာများအား မဆလအစိုးရ၏ ၁၉၈၂ခု နိုင်ငံသား ဥပဒေဖြင့် တဖက်သက်စစ်ဆေးမူပြု၍ ဖြေရှင်း ရေးနည်း ဟန်ပြခြင်းစသည်တို့ကို လေ့လာကြည့်သော အခါ နိုင်ငံတော်၏ ဆန္ဒသဘောထားနှင့် မူဝါဒပိုင်း မှာ နိုင်ငံတကာ တွင်တစ်မျိုး၊ ပြည်တွင်း မှာတစ်မျိုး လှည့်စားမူမျိုးဖြစ်နေသလားဟုထင်မြင်ရပါသည်။
ယခုဖြေရှင်းနေသော နည်းလမ်းအရ အကြမ်းဖက်မူတွင် ရခိုင်သူပုန်အား အသုံးချလာသလို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လာမူသည် ရခိုင်တို့၏ စင်ပြိုင်အစိုးရရရှိရေး အတွက် မြန်မာ အခက် ရခိုင်အချက်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်း၊ ရခိုင်နှင့်ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုများအ ကြားသွေးခွဲအောင် ဖန်တီးခြင်း၊ အကြမ်းဖက်နိုင်အောင်အားပေးခြင်း၊ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများအား ဒုက္ခသည်စခန်းသို့မရောက် ရောက်အောင်ပို့ဆာင်ခြင်းတို့ကိုမည်သူ ကပါဝင်ပက်သက် ပါသနည်း အဖြေကို သူပုန်မှစပြီး ၀န်ကြီးအဆင့်ထိစစ်ဆေးဖော်ထုတ်အရေးယူရမည်ဖြစ်သည်။
၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေဖြင့်စစ်ဆေးမူပြုရာတွင် နယ်မြေ၌အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွေ ရမည်ဖြစ်သည်။
(က) တစ်ချို့ မှာ မှတ်ပုံတင်လည်းရှိ၊ သန်ခေါင်းစာရင်းလည်းရှိ၊
(ခ) တစ်ချို့ မှာ မှတ်ပုံတင်မရှိ၊ သန်ခေါင်းစားရင်းရှိ
(ဂ) တစ်ချို့မှာ မှတ်ပုံတင်လည်းမရှိ၊ သန်ခေါင်းစာရင်း လည်း မရှိဖြစ်နေမည်ကို တွေ့ ရ ပါမည်။
အကြောင်းမှာရိုဟင်ဂျာမှာတိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် ၏ မြန်မာ့အသံနှင့်အသိအမှတ်ပြုစာများရှိပါသည်။ ဤသည်ကို ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု ခေတ် တွင် လက်ခံပြီး အာဏာရှင်နေ၀င်းခေတ် 1960-1988 ထိဖြုတ်ချကာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုအား သွေးခွဲအုပ် ချူပ်မူကြောင့် ချန်လှပ်ထား မူဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ပေးသော်လည်း တစ်ချို့ မှာ အဖေက ဘင်္ဂလီ၊ သားက ကမန်၊ မြေးက အိန္ဒိယ၊ တစ်ချို့ အား လုံးဝစာရင်းမတင်ဘဲ ချန်ထားခဲ့မူ ကို အာဏာ စက်ဖြင့်စီမံခဲ့သည်ကို နာခံယူခဲ့ရပါသည်။ထို့ ပြင်ယနေ့ နိုင်ငံတော်မှ ရိုဟင်ဂျာအသုံးအနှုန်းကို လက် မ ခံနိုင်ကြောင့် ပြောဆို မူသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း မေးစရာဖြစ်လာပေသည်။ ရခိုင်ကသူပုန်လား၊ ရိုဟင်ဂျာကသူပုန်လား၊ ရခိုင်ကခိုးဝင် လာတာ လား၊ ရိုဟင်ဂျာကခိုးဝင်လာ တာလားဟူသည်မှာ အကြမ်းဖက်မူမှသိရှိနိုင်ပါသည်။ အနောက်သားရခိုင် အ၀ကျွန်းသားရခိုင်ဟု ထင်ရှားသော ဘင်္ဂလား နယ်ဖွား ရခိုင်ခိုးဝင် နေမူကို လူမျိုးတူလျင် သူခိုးလည်းနေနိုင်သည် ဟူသော ၀ါဒသတ်မှတ်ကာ ရိုဟင်ဂျာများအားအတင်းဘင်္ဂလားဟူ၍မှတ်ခေါ်နေသည်ကို တွေ့ ရပါ သည်။
အဆိုပါ အာဏာရှင်အစိုးရ၏ လူမျိုးစုခွဲခြားသော ဆောင်ရွက်ချက်ကို ယနေ့ 2012 တွင် ရခိုင်အကြမ်းဖက်မူကိုအခြေခံ၍ဒုက္ခသည်စခန်း ရောက် နေသောရိုဟင်ဂျာများကိုတစ်ဖက်သက်စစ် တမ်းကောက်ပြီး အထောက်အထားတင်ပြနိုင် သူကို နိုင်ငံသားပြုသို့ စဉ်းစားပြီးမတင်ပြနိုင်သူကို ခိုးဝင် နေထိုင်မူဟူသော လ၀ကဥပဒေဖြင့်အရေးယူ မည်ဟူ၍20-11-2012 နေ့ နယ်စပ် ၀န်ကြီး မှ ပြောဆိုခဲ့မူတွင် ဦးစွာ ယခင် လ၀ကနှင့် အာဏာရှင် တာဝန်ရှိ သူများကို အရေး ယူရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုစေ လိုပါသည်။
ယခုတဖန် စစ်ဆေးရာတွင် လူမျိုးစုနေရာတွင် ဘင်္ဂလီဟူ၍ အတင်းရေးသားမူကို လက်ခံရန် အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးသုံးနေပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာ သည် ဘင်္ဂလီမဟုတ်ပါ၊ ဘင်္ဂလီသည်လည်း ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ပါ။ မဆလ ခေတ် နိုင်ငံတော်တွင် နိုင်(၂) ပုံစံတစ်ခါ စစ်ဆေးခံတုန်းက မွတ်စလင်တွေ အားလုံး ရိုဟင်ဂျာလို့ ရေးသားမူကို ဖယ်ကာ ရခိုင်ကို သာ လက်ခံပြုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတော်မှ ရိုဟင်ဂျာများကို စီမံချက်ချပြီး ဘင်္ဂလီ၊ ကမန်၊ အိန္ဒိယစသော လူမျိုးစုအမည်ကို အတင်းပိုင်းခြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အဖြူကဒ်ပင်အတင်းထုတ်ပေးခြင်းကို နာခံပြီး ယူခဲ့ရပါသည်။ ဤသည်မှာ ဥပဒေလား၊ အာဏာစက်လားဆိုတာ ပိုင်းခြားမြင်လိုပါသည်။
ဤသို့ ဖြစ် စဉ်များကို အခြေခံ၍ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သို ချီတက်ကာလ တွင် ဖောက် ထွင်းဝင် လာသော ရခိုင်အကြမ်းဖက်မူ အပေါ် ဖြေရှင်းရာ တွင် အောက်ပါအရေးများကို ဦးစားပေးဖြေရှင်းစေ လိုပါသည်။
(က) နားလည်မူမရှိ၊ ဥပဒေအဆုံးအဖြတ်နာမခံသော ရခိုင်သူပုန်နှင့် ပါတီကို ချက်ချင်း ဖော်ထုတ်အရေးယူရေး၊
(ခ) ဒုက္ခစခန်းအသီးသီးရှိ ပြည်သူများကို အမြန်ဆုံး သူ့ အိမ် သူ့ ယာ သူ့ လုပ်ငန်းသို့ ပြန်လည်နေရာ ချထာ ပေးရေး၊
(ဂ) ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်တွင် သံသယ ၀င်နေသော နိုင်ငံသားရေးကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြီး မဆလအစိုးရ၏၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေ ကို ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့် လူ့ အခွင့်အရေး စံနှုန်း ပေါ်မူတည် ၍ ပြုပြင်ဖြည့် စွက် ကာ စစ်ဆေးမူပြုရန်၊ ဤသည်ကို 2013 မ၀င်လာမီ အရေးပေါ်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေဖြင့်စီမံပြီး ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘ၀ တည် ဆောက်နိုင်ရေးကို ကူဖြေရှင်းပေးပါရန် လေးစားစွာ အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။
This entry was posted on December 13, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
This entry was posted on December 12, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
This entry was posted on December 3, 2012, in အထူးကဏ္ဍ, အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
And I am not the only one who has put their hope in you. So has my Rohingyan friend in Burma. He is somewhere undercover, likely inarefugee camp in Sittwe, bravely gathering information from the ground and keepingalink open with the rest of the world via Twitter @aungangsittwe https://twitter.com/aungaungsittwe He does so at great risk to himself, but he doesn’t mind that. He tells me that he doesn’t care if he lives or dies, to be dead in Hell he would not mind if he could see his people win their rights.
I first got to learn about the Rohingya just this Summer. The apparent ‘riots’ had just begun in June, whenafriend contacted me about their plight which she had learnt about through the fabulous grassroots charity Restless Beings based in London http://www.restlessbeings.org/projects/rohingya . She asked me if I could do something to help her help them, since she knew I wasahuman rights campaigner. I said if you want me to help, go findasource on the ground from whom we can learn the truth as to what is happening (kind of hoping she wouldn’t come back because I really had my hands full with daily atrocities happening in Bahrain). But withinafew days she came back with the telephone number ofaRohingya man living in Arakan state. He wasavillage leader who had been collecting information from all over the area. We interviewed him overanumber of calls. He was living in fear, his village had run out of food and they had been eating green bananas, but even the green bananas had run out he told us. Children were dying of starvation. No one dared to leave their homes for fear that they would be killed. We were able to contact the World Food Program and pass on the information as to which areas were in desperate need of food, and they were helpful. But really no-one else was interested in our interviews which told of terrible atrocities that we were so shocked to hear. Amnesty told us they did not want the interview manuscripts as they already had so much information on Myanmar that they couldn’t process it fast enough. News channels seemed disbelieving when we tried to report such atrocities were taking place. If your research team are interested to know more about those interviews some of our notes here. http://www.savetherohingya.blogspot.co.uk/p/interview.html One thing of interest to note is that our source stated that the police were burning the Rohingya houses (and that suggestions that they were burning their own houses wereacomplete lie).
Have you ever seen throughout historyapeople rise up of their own accord, without provocation or planning, to wipe out an entire race from their neighbourhood inamatter of weeks? This is clearly ethnic cleansing from whichever way you look at it. The term genocide will never be accepted because the public will always find this world too abhorrent to accept and the politicians will always fear the legalities of having to act, and one may argue that what is happening to the Rohingya has only recently resulted in hundreds of deaths rather than thousands. My conclusion is that genocide has been in the planning, and social media has brought about raised awareness and international attention that is helping to stop the process before the plan has been fulfilled. However, these people are now hanging on to their future byathread, with nowhere to go and no-one coming to their aid. 110,000 have now been driven from their homes. Look at the manner in which thousands of them were forcibly removed and driven into camps during June. http://www.youtube.com/watch?v=YCnj4QmPgTc The Rohingya are now hated by people on all sides who have blatantly declared them as nothing more than viruses that need eradicating. They cannot move to another part of Burma. They have been driven from their homes to live in tents in muddy fields or hiding in boats or on the mountains. They are struggling to get medical assistance, food, clothes and shelter. Neither Bangladesh or Thailand will accept them. Often they try to escape but drown at sea. Hundreds have been arrested never to be seen again. They are denied visits in prison where they have been reported to be suffering from severe torture and often left naked, and even young boys and girls are often arrested. In addition women and girls are frequently taken away to be raped. I compiledalist of recent reports on events in October here: http://www.savetherohingya.blogspot.co.uk/2012_10_01_archive.html
In addition to the new pipeline,adeep sea port is being built at the port of Sittwe to handle the large oil carrying vessels which will be arriving, and massive development of the Kaladan River is taking place to enable boats to travel from India up to central Burma http://www.arakanrivers.net/?page_id=7474 The impact of the heavy militarisation of the area to assist with these developments can be read about here http://www.arakanrivers.net/?page_id=159 There is alsoafancy new technology development zone to be built in Kyaw Pru on the Northern half of Ramree Island. http://youtu.be/gJntaVuritU This area was recently razed to the ground during the violence and 10,000 people had to flee via boats, many of whom it seems must have been drown at sea because not all made it back to shore. The satellite images of the area were recorded by Human Rights Watch www.hrw.org/sites/default/files/related_material/2012_Burma_Satimage.pdf One of my friends who used to work in Burma sent me this observation
The government may try to blame the violence entirely on the Arakenese Buddhists and hide their involvement in the matter, but they cannot deny the treatment of the prisoners that they routinely torture in prison. Indeed aren’t there still UN and humanitarian workers still in prison, since they became witnesses to the regime crimes? The United Nations must now insist on full access to the prisons, that all political prisoners and aid workers are freed, and without such steps taken how can the West even begin to suggest that this isareformed regime? The Rohingya are now at serious risk of elimination. Even Thein Sein stated clearly to the UN that he saw their removal as the only solution to the problem. http://mizzima.com/news/inside-burma/7514-un-rejects-burmas-offer-to-resettle-rohingya.html%20
I learnt through it that genocide is always caused by politics, and I understood that it can be stopped, although it happens over and over again. It takes place asaresult ofaseries of decisions. Please watch this documentary. It is long but is may be the best documentary I have ever seen and if its advice is heeded thousands of future lives (or maybe millions) could be saved. Please let this be your defining moment asatruly great man that stoppedagenocide, where many others have failed.
This entry was posted on November 14, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
A letter to Barack Obama President of the United States
November 7, 2012Hon. Mr. Barack Obama
First, I would like to congratulate you for your victory in the election. The people of the United States have given you another mandate of four years to lead their country for positive changes. I also believe that, with this new mandate, you will continue to extend your leadership to support the freedom-loving peoples from all over the world, including in my home country Burma, also known as Myanmar, in their continued struggle for freedom, justice, democracy and equality among all ethnic nationalities. With this belief, I strongly request you not to visit Burma for the time being.
Many people believe that Burma is now on the right path, and in transition to democracy. So, let me begin with where we are right now.
It is true that Burma’s democratic opposition is now working within the regime’s new political system, based on the undemocratic 2008 Constitution. The National League for Democracy (NLD), led by Daw Aung San Suu Kyi has joined the Parliament through the by-election in April. Ethnic politicians who boycotted the 2010 election have also formed political parties and prepared to stand in future elections. Workers are allowed to form trade unions. Peoples are allowed to stage protests subject to attaining permission from relevant authorities in advance.
More than 700 political prisoners were freed between October 2011 and now. But they are free only because the President has suspended their prison terms. They can be re-arrested without warrant and sent back to prison to serve the remainder of their prison terms if the President is not happy with their actions. Furthermore, there are still more than 300 political prisoners, including human rights defender U Myint Aye, that remain incarcerated in prisons.
Recently, the regime announced that all publications be made public without censorship. However, there are still strict guidelines that the media has to follow. The government’s censorship board, known as “The Press Scrutiny and Registration Division,” still exists. The laws that threaten the freedom of press are still active. And the regime’s propaganda machine is still up and running.
The regime said it is committed to making peace with ethnic resistance forces. Most of the ethnic armies have acceptedaceasefire agreement and continue peace talks with the regime. However, their expectation to haveameaningful political dialogue and sustained political solution are far away from the reality while they are forced to open their areas for economic advancement and development projects. And severe fighting in Kachin State, in the northern part of Burma, between the regime’s troops and the Kachin Independence Organization (KIO), is ongoing and now entering its 18th month resulting in more than 100,000 internally displaced persons.
Violence has erupted in Rakhine State, in the western part of Burma, between the Rakhine Buddhist community and the Muslim communities, known as the Rohingya, since May of this year and continued to this day with the great loss of hundreds of lives, thousands of houses and properties, and more than one hundred thousand peoples displaced. Preventing violence, protecting and providing safety for civilian populations, making the rule of law effective and bringing those responsible for the violence to justice are the responsibilities of President Thein Sein’s so-called civilian government. However, the ongoing and continued crisis in Rakhine State proves that this government has continuously failed its own responsibilities in serving the people of Burma.
There are three major areas where I have not seen any changes. First, the judiciary system is still not independent and impartial. It is still working to serve the pleasure of the regime. Incompetent judges are running “kangaroo courts” with the support of corrupt and abusive law enforcement officers whose only way to get confession from the accused is torture and manipulation. Many laws and decrees created by the successive military regimes to oppress democratic opposition are still active and being used. Second, the country’s economy is still dominated and controlled by the military, crony capitalists, and families of the regime. There is no chance for ordinary citizens to compete with them onalevel playing field. And third, the Burmese military is still above the law and dominant in the country’s political affairs with supreme powers. There is no sign in sight that the Burmese military will stop committing human rights violations and come under the civilian control.
This is where Burma is right now. I seriously doubt to call this situationatransition to democracy. That’s why, I request you not to visit Burma at this time.
The country is still ruled by the Burmese military and the military-back Union Solidarity and Development Party (USDP), led by ex-generals. Their political foundation is the 2008 Constitution, which is designed to grant the supreme powers in the hands of the military and it’s Commander-in-Chief who can run the military independently. The military is independent from all administrative, legislative and judiciary authority; yet can interfere in all branches of power. It controls 25% of the seats in each parliament and three significant security ministries in the government, and ensures civilian judges have no jurisdiction over members of the armed forces. Moreover, the Commander-in-Chief can assume all powers, dismiss the government and rule the country under the martial law in the name ofastate of emergency. Although regional parliaments and governments are formed at the ethnic minority areas, the Union President holds the powers to appoint Chief Ministers and Judges which leaves little for the ethnic minorities in their expectation for autonomy and self-determination.
The constitution was purposefully crafted to be difficult to amend. At least 20% of lawmakers have to submit the Bill to amend the Constitution to the Union Parliament,aJoint Session of the Lower and Upper Houses, and the amendment can only be approved byavote of more than seventy-five percent of all the representatives of the Union Parliament. This effectively givesaveto power to the military with its 25% of seats in the Parliament. Even if all 75 percent of the elected representatives stand together for the amendment, they can’t win if they can’t get even one vote from the military bloc.
I would call this transition asa“transition to the establishment of military supremacy with limited democracy.” The opposition will have access to the power, can contest in election, will have some seats in the Parliament, can raise their voices, but will not be able to control the power. Exercise of power will still remain in the hands of the military and its allies constitutionally. This might be similar to Indonesia under the Suharto’s regime or Egypt under the Mubarak’s regime. I believe your visit to the country at this time will only strengthen the ruling USDP party and President Thein Sein’s government, and undermine the democracy activists and ethnic minorities as well as remaining political prisoners and ever-growing civil society organizations.
However, I understand that you may have already decided to go. If so, I request your visit to Burma should not be just to meet with President Thein Sein and Daw Aung San Suu Kyi. You should make your visit beneficial for the people of Burma by;
(1) Meeting with your real counterpart, Commander-in-Chief General Min Aung Hlaing and educate him to put the military under civilian control and to serve the people of Burma.
(2) Address the Union Parliament and encourage the members of the parliament to be courageous to amend the 2008 constitution to be democratic and equal among all ethnic nationalities.
(3) Meeting with all political parties, civil society organizations and former political prisoners and support their continued struggle for democracy, human rights and national reconciliation.
(4) Visiting refugees in Kachin State and Rakhine State.
(5) Visiting U Myint Aye, one of the remaining political prisoners, at the Loi Kaw prison in Kayah State to show your solidarity with all remaining political prisoners.
(6) Meeting with ethnic leaders from the United Nationalities Federal Council in Thailand to support their call for political dialogue and sustained solution for making of permanent peace.
This entry was posted on November 8, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
A Letter sent to Daw Aung San Suu Kyi and Statement on violence, hatred,of minorities | Christian Muslim Forum
By Back to Religion Editor
Letter sent to Daw Aung San Suu Kyi and Statement on violence, hatred, mistreatment of minorities and terrorist Attacks:
Dear Ms San Suu Kyi,
We write to you as the Presidents of the Christian Muslim Forum in England. We are concerned to see accounts of attacks on the Rohingya Muslim people of Burma at the hands of terrorists and the Burmese military.
We urge you to plead for the cause of the Rohingyas with the Burmese Government, for cessation of hostilities against them and impartial application of law and order.
We also ask you to highlight the ongoing discrimination against the Rohingya, especially since the 1982 Citizenship Law and call upon the Burmese government to recognize the Rohingya as Burmese citizens. Ethnic cleansing and marginalization of minorities can have no place inamodern state.
Signed by the Presidents of the Christian Muslim Forum: Revd Alison Tomlin, Anjum Anwar, Rt Revd Donnett Thomas, Rt Revd Dr Richard Cheetham, Shaykh Ibrahim Mogra, Rt Revd Paul Hendricks.
1. We acknowledge that religions are implicated in acts of violence and terrorism, though religion does not justify atrocities2. We affirm that no religion, in itself, advocates violence or terrorism
8. We are opposed to religious intolerance, Islamophobia, anti-Semitism and marginalization of minorities and condemn intolerant attitudes
12. We call on all governments to work for peace, instead of increasing conflict, and to respect all people within their countries.
This entry was posted on November 1, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
Filed under Home, အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီသက်တမ်းကတော့ ခရီးတစ်ဝက်ရောက် လုနီးပါပြီ။၂၀၁၅ မှာ ရွေးကောက် ပွဲကြီးပြန် စတော့မယ့်သမ်္မတအသစ်၊ ပါတီအသစ်နဲ့ဒီမို ကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကို ချီတက်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် အဟောင်း ထဲကအကောင်းတွေကိုရွေး ထုတ်ပြီး-ရောသမမွှေကြမလားဆိုတာ-၂၀၁၅ ကတော့ ရင်တမမနဲ့ စောင့်ကြိုနေလေရဲ့။နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ၊ သင်တို့ရဲ့ပါတီဝင်ကဒ်ပြား အရေအတွက် ကိုကြည့်ပြီးပီတိ ဖြစ် မ နေကြပါနဲ့၊ ပါတီဝင်တွေအပေါ်မှာ လုံးဝဥဿုံယုံကြည်မူ့ အပြည့်ရှိနေကြ လား။ ပြည်သူတွေထဲမှာ လူတစ်ယောက်က ပါတီဝင်ကဒ်ပြားဘယ်နှစ်ခု ကိုင်ဆောင်ကြသလဲ ဆို တာအဖြေရှာကြပါ။
အမာခံတွေမွေးထုတ်ပေးဖို့ သင်တို့ပါတီတွေက ဘာတွေစွမ်းဆောင် ပေးပြီးပြီ လဲ။ ပြည်သူတွေ ကတော့ မဲဆန်္ဒပြုပြီး-သင်တို့ကိုအပေါ်ရောက်အောင် တွန်းတင် ပေးလိုက်တယ်။ အပေါ်လည်းရောက် သွားတော့-အောက်က တွန်းတင်ပေးလိုက်တဲ့ မဲဆန်္ဒရှင် ပြည်သူတွေကိုဘာမှပြန်မကြည့်ကြတော့ဘူး၊။ မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့- ကိုရွှေစည်းရုံးရေးမှူးတွေရဲ့မျက်နှာကိုလည်းရွှေးကောက်ပွဲပြီးကမမြင်ရတော့ဘူး၊ သူတို့ ခင်း ပေး တဲ့လမ်းတွေလည်းပတ်ကြားတွေအက်-ရေညှိတွေတက်နေပြီ။
ပါတီဝင်ကဒ်တွေကိုင်ဆောင်ပြီး-နဝေတိမ်တောင်ဖြစ်နေကြတဲ့ပါတီဝင်တွေရဲ့ ဘ၀တွေကို ဂရုပြုမိကြရဲ့ လား။ ရပ်/ကျေးတွေမှာက တစ်ပါတီထဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်- သူ့ထက်ငါအပြိုင်ဆိုင်ကြဲနေကြတာ အားလုံးအသိပါ။ အပေါ်မှာတော့မသိဘူး-အောက်မှာကတော့ ဘယ်ပါတီကလက်မထောင်နေ လည်း ဆိုတာ အသာလေးစောင့်ငဲ့ ကြည့်ကြအုံး။ ပါတီသာဝင်ထားကြတယ် အခအုချိန်ထိ ဘာမှဖြစ်မလာ သလို ဘာမှလည်း ပြောင်းလဲခြင်းမရှိလာပါဘူး။ အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် ““ ဒုံရင်းကဒုံးရင်း ”” ပါဘဲ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်-NLD ပါတီကတော့ သူ့ပါတီဝင်တွေအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အ လမ်းတွေ မျှော် လင့် ချက်မဲ့နေတဲ့ လူငယ်များနဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေ မဖြစ်ဘို့အတွက် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ပညာသင်ကြားနိုင်ဘို့မြို့နယ်အလိုက် သင်တန်းကျောင်းတွေ ဖွင့်လှစ်ပေးဘို့ NLD ဥက္ကဌဒေါ်စုကြည် ကိုယ်တိုင်က မြို့နယ်တွေဆင်းပြီး သူပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို့ ကတိဂ၀တ်တွေ ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ပါတီဝင်တွေ အတွက် မျှော်လင့် ချက် ရောင်ခြည် တစ်ခုဘဲလေ။
ပါတီတစ်ခုရေရှည်တည်တံ့ဖို့အတွက် အဲဒီပါတီမှာ အမာခံအင်းအားလိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအမာခံတွေ ဟာ သူရဲ့ ပါတီ အပေါ်မှာ သစ်္စာရှိတဲ့အမာခံတွေဘဲဖြစ်ဖြစ်ရမယ်။ ဘယ်သူတွေစည်းရုံးစည်းရုံ၊ ဘယ်ပါတီ ကပဲ မဲဆွယ်ဆွယ်ကိုယ့်ပါတီမှကိုယ်ပါတီဘဲဆိုတဲ့ သံမဏိစိတ်ဓါတ်မျိုးရှိနေရပါမယ်။ တချိန် က အရှိန် ၀ါတွေ သုံးပြီးပါတီဝင်အင်းအားနဲ့ကဒ် ပြားတွေအများကြီးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ပါတီကြီးတွေ ကတော့ အခုချိန်မှာမိမိ ပါတီဝင်တွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့ အမာခံပါလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိမိ တို့ရဲ့ပါတီ ၀င်တွေ ပါတီအပေါ်မှာ ယုံကြည်သက်ဝင်မူ့ ရှိမရှိ ဆန်းစစ်ဖို့လိုနေပါပြီ။
၁၉၉၀-ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းက(တ.စ.ည)ရဲ့ပါတီဝင်အင်အားဟာ ကဒ်ပြားအရေအတွက်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်ရင်းကို မယှဉ်နိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ (တ.စ.ည)ရဲ့အရန် ပါတီဖြစ် တဲ့ တောင် သူ လယ်မား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး ပါတီ၊ အလုပ်သမား စည်း လုံးညီညွှတ်ရေး ပါတီ၊ လူငယ်စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ ဆိုတဲ့ အရန်ပါတီ(၃)ခု ကလည်း(တ.စ.ည)ကိုဝန်း ရံပေး ထားကြတယ်။
အဲဒီတုန်းက (မ.ဆ.လ)ရဲ့ အရှိန်အ၀ါကလည်း အငွေအသက်ကျန်သေးတော့(တ.စ.ည) အတွက် အင်အားစုရတာသိပ်မခက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း (တ.စ.ည)ရဲ့ အကြီးအကဲပိုင်းက အနိုင်လို့ယူဆ ခဲ့ကြ တယ်။ ဒါပေမဲ့တကယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်မှာတော့၊ (NLD)ကို အပြတ်သတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ ဒါသင်ခန်းစာယူစရာပါ။ ကဒ်ပြားဟာကဒ်ပြားဘဲ၊ ကဒ်ပြားသည် အမာခံမဟုတ်ဆိုတာ သတိချပ်စေ ချင်ပါတယ်။ ဒီတော့ကား အချိန်ရှိခိုက် လုံးလစိုက်ပြီး မိမိပါတီဝင်တွေရဲ့ ဘ၀တစိတ် တဒေသ ကို အောက်ခြေအထိဆင်းပြီး ကြည့်ရပါမယ်။ ကိုယ်ပါတီဝင်တွေ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ ဘာအခက် အခဲတွေရှိနေလဲ၊ ဘာတွေ လုပ် ပေး ဘို့လိုအပ်သလဲဆိုတာ၊ ပါတီအကြီး အကဲတွေ ဆန်းစစ်ဖို့တော့ လိုနေပြီ။
ဟိုတစ်လောတုန်းက ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ မြို့နယ် အလိုက်ပြည် သူလူထု (ပါတီဝင်)တွေ အတွက် အတိုးနှုန်းသက်သာတဲ့ ချေးငွေတွေ ချပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း အဲဒီချေးငွေတွေ ဟာ ပြည်သူ လူတု (ပါတီဝင်)တွေအပေါ်မှာ ကျိုးသက်ရောက်မှု့မရှိခဲ့ဘူး မြို့နယ်အကြီး အကဲပိုင်း ကဘဲမိမိတို့ ကိုကျိုးအတွက် အသုံးချသွာကြသည်။
ရပ်ကွက်ထဲမှာနေ့ပြန်တိုး၊ မတ်တိုးတွေယူပြီး စားဝက်နေရေးအတွက် ဘ၀ကို ဆင်းဆင်း ရဲရဲရုန်း ကန်နေရတဲ့လူတွေဆီမှာ ဘယ်ပါတီက ကဒ်ပြားကို ကိုင်ဆောင် ထားကြသလဲ ဆိုတာလေ့ လာကြည့် ပါ။ ထမင်းမကျွေးတဲ့ အဲဒီကတ်ပြားတွေကို သူတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာကိုင်ဆောင်ထားနိုင်ကြမလဲ။ သူတို့တွေဆီက ထောက်ခံမဲတစ်ပြားကိုအားမနာလျှာမ ကျိုးနဲ့ရယူပြီး အမတ်လောင်းဖြစ်သွား တဲ့ ပြည် သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက သူတို့ရဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေးကို ဘယ်အချိန် ကာလအထိ စောင့်စား ခိုင်းအုံးမှာလည်း။
ကိုယ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူတွေစီးပွားရေးကြပ်တည်းမူ့၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး မူ့၊ အလုပ်လက် မဲ့ပြဿ နာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရမူ့တွေကို ၂၀၁၅ မတိုင်ခင်ကွင်းဆင်းလေ့ လာကြပါအုံး၊ နောင်လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မိမိတို့ပါတီဝင်တွေက မိမိတို့ကို ထောက်ခံအားပေးနိုင်တဲ့ အင်အားတွေ ရှိကြသေးရဲ့လားလို့၊ သူတို့ဘ၀၊ သူတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်၊ သူတို့အားကိုအားထားပြု တဲ့ပါတီကြီး က ဘာတွေ နဲ့ ချွေးသိပ်ပြီးပြီလဲ၊ ““အူမတောင့်မှသီလစောင့်တယ်”” ဆိုတဲ့ မြန်မာစကား ရပ်တစ်ခုလို (NLD) က အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာအတွက် ခင်းပေးတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ကို မိမိပါတီဝင်တွေ တက် မလျှောက်ကြဘူးလို့ ဘယ်သူက အာမခံချက်ပေးနိုင်လို့လဲ။ဆင်းရဲသားပြည်သူလူထုရဲ့ဘ၀မှာ စားဝတ်နေရေးသာပထမ၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဒုတိယလေ၊ ဒီတော့တိုင်းပြည်အတွက်လို့ ဘယ်လို ပဲပြောနေနေ တိုင်းပြည်ဆိုတာ ပြည်သူ တွေရှိလို့ဖြစ်လာတာပါ။ ပြည်သူတွေချမ်းသာမှ တိုင်းပြည် ချမ်းသာမယ်ဆိုတာ ကတော့ အမှန်တကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ အမှန် တကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုဆိုတာ ဘယ်သူမှငြင်းလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ ပါတီခေါင်းဆောင် ပုဂ်္ဂိုလ်များ သိထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
This entry was posted on October 21, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
စစ်တွေမြို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သဲချောင်းသားရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ
သူတို့ကချမ်းသာတယ်၊ဘုရာသားတော် ရဟန်းသင်္ဃာတွေမှာ စည်စိမ်ချမ်းသာခြင်းကို မလိုဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ ကျမတို့က ဆင်းရဲပါတယ်။ ၀မ်းတစ်ထွာ ပြည့်ဝဖို့၊ ခါးလှဖို့တော့ မနည်းရုန်း ကန်နေရပါတယ်၊ ရိုးသားစွာ စီးပွားရှာခြင်းပါ၊ မြို့ပေါ်မှ ပစ္စည်းအနည်းနည်းဝယ်ပြီး ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့ကျေးရွာရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း ရောင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်း ရောင်းပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလုပ်နေတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ဒါက “ဘုန်းကြီးကိုစာချသည်ဟု မယူဆစေချင်ပါ ဘုရားသားတော်များအနေနဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေကို ထားသင့်ပါသလား၊တစ်ယောက်ပစ္စည်းလုယူပြီး နောက်တစ်ယောက်ကို ပေးရတယ်လို ဘယ်ဗုဒ္ဓဟောတရားမှာ ပါလို့လဲ ” စစ်တွေမြို ပေါ်ရှိ ရဟန်းတော်များ၏ ပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ အများကြီး ၀မ်းနည်းမိပါတယ် ။ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ အာဏစက်က ရဟန်သင်္ဃာတော်များအပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိပါလား?
This entry was posted on October 15, 2012, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
ဝေလေလေမြအေးနဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ် ကိုကိုကြီးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ………….
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို နားမလည်ကြပါဘူး။ ဥပဒေဆိုတာကို အထင်မကြီးဘူး။ ယုံကြည်မှုမရှိဘူး။ ဥပဒေက အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့လဲ မထင်မြင် မယူဆဘူး။ ငွေများရင် တရားနိုင်တယ်။ ငွေရှိတဲ့သူဟာ ဘယ်လောက်ကြီးလေးတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုကို ကျူးလွန်ပါစေ သူဟာ ငွေနဲ့ပေါက်ပြီး အဲဒီအမှုကို ရှင်းလိုက်လို့ရတယ်လို့ ပြည်သူလူထုအများစုကြီးက လက်ခံထားကြတယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာအောင်လဲ တရုတ်ကပြားဗိုလ်နေ၀င်းကစပြီး စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်က ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် စံပြအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ပြခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်း (၅၀) ဆိုတဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သက်တမ်းဟာ နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူး။
တရုတ်ကပြား ဗိုလ်နေ၀င်း အာဏာသိမ်းပြီး ၁၉၆၂ ဧပြီလမှာ မွေးတဲ့သူက အချိန်အခါနဲ့အညီ အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင် မျိုးဆက်သုံးဆက်လောက် ရနေပြီ။ မျိုးဆက်သုံးဆက်ဆိုတဲ့သက်တမ်းဟာ နည်းတယ်လို့ ဘယ်သူ ပြောနိုင်မှာလဲ။ အခု ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုဟာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူးလို့ -င်ထဲက လိပ်ခေါင်းထွက်အောင် ကုန်းအော်ခဲ့တဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးတို့၊ ကိုမြအေးတို့ဆိုတာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုကို ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီခေတ်က တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းက မွေးတောင် မွေးမယ်မထင်ဘူး။ မွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲ နှပ်ချေးတွဲလွဲ အရွယ်လောက်ပဲ ရှိအုံးမယ်ထင်တယ်။ အဲဒီတော့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုဟာ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူး၊ ဟုတ်တယ်ဆိုတာ သူတို့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲ။ ဗိုလ်နေ၀င်းက ၁၉၆၂ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက သမိုင်းစစ်၊ သမိုင်းမှန်တွေကို ဖြောင့်ဖျက်တယ်။ လုပ်ကြံဖန်တီးပြီး သမိုင်းအတုတွေကို ဒေါက်တာအေးကျော်တို့ ကျော်ကြားတဲ့ သမိုင်းလိမ်ဆရာကြီးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး၊ လိမ်တယ်။ ဖျောက်တယ်။ ဖျက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သမိုင်းဆိုတာ လိမ်လို့ မရဘူးဆိုတာကို နိဂုံးမကောင်းခဲ့တဲ့ တရုတ်ကပြား ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ် သမိုင်းလိမ်ဆရာကြီးတွေ မသိခဲ့ကြဘူး။ ဒီတော့ တရားဥပဒေမဲ့ မတရား ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီခေတ်က တိုင်းရင်းသားလို့ သတ်မှတ်ပြီးသား “ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစု”ကို စစ်အာဏာရှင်တွေက တိုင်းရင်းသားစာရင်းက ပယ်ဖျက်ခဲ့တာ ဘာမှ မဆန်းဘူး။
ဝေလေလေမြအေးကလဲ ထောင်ထဲက ထွက်လာပြီး ကယောင်ကတမ်းနဲ့ ထအော်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ သနားစရာကောင်းလိုက်တာ ဝေလေလေမြအေးရာ။ စစ်အစိုးရက ထောင်ထဲထည့်လိုက် ပြန်လွှတ်လိုက်၊ ပြန်ဖမ်းလိုက်နဲ့ ၎င်းရဲ့ အသက်တစ်ဝက်နီးပါး ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ရတဲ့ ဝေလေလေမြအေးနဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်ကိုကိုကြီး၊ ပညာကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ခဲ့ရတဲ့၊ ဝေလေလေမြအေးနဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်ကိုကိုကြီးတို့ လေ့လာဆည်းပူးမှုမရှိဘဲ၊ သုတေသနလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ သမိုင်းပါရဂူကြီးတွေ ဒီဇိုင်းနဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုဟာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူးလို့ လိပ်ထွက်အောင် အော်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလို အော်ပြီး မကြာပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မွတ်စလင်မ်တွေကို သတ်ပါလေရော။ ကျူးကျော်သူတွေ ဆိုပြီးတော့လေ။
အဲဒီတော့ ဒီသေဆုံးသွားတဲ့ အပြစ်မဲ့လူသားတွေအတွက် ဝေလေလေမြအေးနဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်ကိုကိုကြီး ဘယ်လို တာဝန်ယူပေးမှာလဲ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စကားတွေဟာ နိုင်ငံတကာ တရားဥပဒေအရ ဘယ်လိုအနေအထားရှိသလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့တွေ လေ့လာထားကြပါ။ ဝေလေလေမြအေးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြန်မာမွတ်စလင်မ်ခေါင်းဆောင်လိုလို၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လိုလို…………….. ပြည်သူအတွက် ဘာတစ်ခုမှ မယ်မယ်ရရ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့မှုကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
ဟိုတစ်လောက ဦးသိန်းစိန်က အမေရိကန်မှာ ပြောတယ်။ ဒီလို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အတွက် ကျုပ်တို့က အနှစ် ၂၀ လောက်တည်ဆောက်ခဲ့ရတာတဲ့။ ကဲ………… ရှင်းပြီလား။ ခင်ဗျားတို့ လုပ်ခဲ့လို့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ ဒီနေ့ထက်ထိ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေရဲ့ နှုတ်က တစ်ခွန်းမျှ မပါသေးဘူး။ ဝေလေလေ မြအေးရေ… ခင်ဗျားဟာ အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်မ်လောကမှာ နာမည်ပျက်လာတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဆင်ဖြူမျက်နှာကို ဆင်မည်းမကြည့်ဝံ့သလို အပြစ်မဲ့တဲ့၊ ဖြူစင်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ မျက်နှာကို မကြည့်ဝံ့လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဝေလေလေမြအေးတစ်ယောက် အခုထက်ထိ မသွားသေးဘူး။ ဝေလေလေမြအေးရေ…………. ခင်ဗျားရဲ့ သက်တမ်းမှာ ပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေများ ထိထိရောက်လုပ်ပေးဖူးလဲဆိုတာ နဖူးပေါ်ကို လက်တင်ပြီးသေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစား။
ခင်ဗျားဟာ မွတ်စလင်မ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲ မမေ့နဲ့အုံး။ ခင်ဗျားကို မျက်လုံးဇုံမိတ်ပြီး၊ မွတ်စလင်မ်တွေဘက်ကို လိုက်ခိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး။ တရားမျှတမှုဘက်ကနေ ရပ်တည်ဖို့ ပြောနေတာ။ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းကို သေသေချာချာလေ့လာပါ။ ပြီးရင် ခင်ဗျားအနေနဲ့ ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရက “တိုင်းရင်းသား”ပါလို့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုကို စစ်အာဏာရှင်တွေက နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး မတရား “တိုင်းရင်းသား”မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းစစ်သမိုင်းမှန်ကို ခင်ဗျား ဖော်ထုတ်မှသာလျှင် ခင်ဗျားရဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေအပေါ်တင်နေတဲ့ သွေးကျွေး ကျေပါလိမ့်မယ်။ နို့မဟုတ်ရင်တော့ ခင်ဗျားဟာ သမိုင်းမှာ ရုပ်ဆိုးသူအဖြစ် မွတ်စလင်မ်တွေ၊ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ ထံပါးမှာ သမိုင်းတင်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ပညာရှိသူယုတ်မာတွေကတော့ ခင်ဗျားကို ကောင်းချီးပေးကြမှာပေါ့ဗျာ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဝေလေလေမြအေးအနေနဲ့ ဒီအချက်လေးတွေကို စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။
ကိုမြအေး ကွယ်လွန်သေဆုံးတဲ့အခါမှာ မိမိရဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို ဘယ်သူတွေက ရေချိုးပေးမှာလဲ၊ မွတ်စလင်မ်တွေလား၊ ကာဖိရ်တွေလား။
ကိုမြအေးရဲ့ဂျနာဇဟ်ကို ဘယ်သူ ဖတ်ပေးမှာလဲ။ မွတ်စလင်မ်တွေလား၊ ကာဖိရ်တွေလား။
ကိုမြအေးရဲ့အတွက် အီဆွာလေစ၀ါးဗ် မည်သူပို့ပေးမှာလဲ။ မွတ်စလင်မ်တွေလား၊ ကာဖိရ်တွေလား။
အကယ်လို့ ဝေလေလေမြအေးက ငါသေရင် ကိုကျော်သူလက်ကို အပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့က ဘာမှ ပြောဆိုစရာမရှိပါ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့
ကိုယ်မသိလို့ မရှိဘူးလို့ မပြောပါနဲ့။ သမိုင်းစစ်၊ သမိုင်းမှန်ကို လေ့လာပါ။ သုတေသနလုပ်ပါ။ ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီခေတ်က ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုဟာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခဲ့သလို ယခု ပါတီစုံဒီမိုကရေစီခေတ်မှာလဲ တိုင်းရင်းသားပြန်ဖြစ်လာအောင် တတ်နိုင်သမျှ “အော်”ပေးပါ။
တရားမျှတမှုအတွက် မွတ်စလင်မ်တွေဘက်က ရပ်တည်ပါ။ တောင်ကုတ်မှာ မတရားသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေအတွက် “အော်”ပေးပါ။
မှတ်ပုံတင်ကိစ္စအတွက် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေအတွက် “အော်”ပေးပါ။ တတ်နိုင်သမျှ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပေါင်းပြီး “အော်”ပေးပါ။
မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်မ် (၁၀) သန်းကျော်ဘက်က တရားမျှတစွာ နေရပ်တည်ပေးပါ။
ကိုယ့်ကြောင့် တစ်ပါးသူတွေရဲ့ သွေးတွေ၊ အိမ်တွေ၊ မိသားစုတွေ ပြိုကွဲပျက်စီးမှု မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေရဲ့ ကျခဲ့ရတဲ့သွေးတွေထဲမှာ ဝေလေလေမြအေးနဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်ကိုကိုကြီးရဲ့ နှုတ်ကြောင့်လဲ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ အဲဒီအတွက် သောင်ဗဟ်လုပ်ပါ။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေကို တိုင်းသိပြည်သိ ပြန်တောင်းပန်ပါ။
This entry was posted on October 13, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
ရခိုင်အကြမ်းဖက်နိုင်ငံရေးပါတီ RNDP ၏ မျက်နှာဖုံးကွာကျခြင်း
မြောက်ဦးမြို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ မရမာလူမျိုးတစ်ဦးမှ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့စွဲနဲ့ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရခိုင်အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ထောက်ခံအားပေးလှုံ့ဆော် ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သောပါတီဖြစ်တဲ့၊ တိရိစ္ဆာန်ကုဆရာဝန် ဦးအေးမောင် ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ တိုင်းပြည်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများ၊ ဆူပူအုံကြွမှုများ၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုများ စတဲ့၊ စတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုကြီးများကို ကျူးလွန်နေသော RNDP ၏ သူတော်ယောင် မျက်နှာဖုံးကွာကျစေရန်နှင့် ၎င်း၏နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ပြန်လည်ရရှိစေရန် တရားဥပဒေအရ အရေးယူပေးပါရန် မြောက်ဦးမြို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ မရမာလူမျိုးတစ်ဦး၏ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ကို ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ယင်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့မျှ တုံ့ပြန်ခြင်း၊ အလေးထားစဉ်းစား၍ တရားဥပဒေအရ အရေးယူပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်းလဲ သိရှိရပါတယ်။
“ဒီအပြစ်မဲ့ မြောက်ဦးမြို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ မရမာလူမျိုး အိတ်ဖွင့်ပေးစာရေးသားသူအနေနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအကြောင်း တဖွဖွ ပြောဆိုနေသူ၊ ကော့မှူးမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ စာရေးသားပေးပို့ပြီး ၎င်းရဲ့ကိစ္စအတွက် အရေးယူပေးပါရန် တောင်းဆိုသင့်တယ်”လို့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုအသံကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted on October 9, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
အမေရိကန်မြေပေါ်တွင် အနုမာန အယူအဆကို အခြေပြုဖြေရမည့်မေးခွန်းကို မကြိုက်ဟန် ပြခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို အမှန်နှင့်အမှား အကြား၊ ကြား(ဂျား)နေသူဟု စွပ်ဆွဲခံရမည်ကို စိုးရိမ်။
၁။ This question is hypothetical. Not practical.
သင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းပေးမှာ ပါလဲဆိုသော မေးခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် This is hypothetical. Not practical ဟု ခပ်ထန်ထန်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
၂။ ဘေဘီလုံ အဘိဓါန်ကို ဖွင့်ကြည့်သည်။
Hypothetical; Based on or serving asahypothesis. Theoretical အနုမာနအယူအဆကို အခြေခံသောImagined or suggested but necessarily real or true ၊ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်ဖြစ်သော၊ဟုတွေ့ပါသည်။ “တစ်နည်းအားဖြင့် ကြောင်းကျိုှးဆီလျှော်စွာ စိတ်ကူးယဉ်သော” ဟု ဘာသာပြန်လျှင် ယ္ခု blog post ကိုဖတ်နေသူ အသင် သဘောတူပါသလား။
အထက်ပါမေးခွန်းအား အမေစု အနေဖြင့် အနုမာနအယူအဆကို အခြေခံသော အဖြေများဖြင့်သာ တုံ့ပြန်သင့်ပါသည်။
၃။ အမေရိကန်သမ္မတလောင်းများ စကားစစ်ထိုးရန် ဆိုင်းပြင်းနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်ရှိနေသော အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ထိုအချိန်အခါ သမယ သည် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး စကားစစ်ထိုးပွဲများ ကျင်းပခါနီး အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုသာ မဲဆန္ဒရှင်များ ရွေးချယ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် အမေရိကန်သမ္မတ တစ်ဦးအနေဖြင့် နိုင်ငံအတွက် မည်သို့မည်ပုံလုပ်ဆောင်ပေးမည့်အကြောင်း အနုမာန အယူအဆ များပြောကာ စကားစစ်ထိုးခြင်းဖြစ်၍ အမေရိကန် သမ္မတတစ်ဦးဖြစ်ရန် အနုမာန အယူအဆများ ပြောတတ်သည့် အရည်အချင်းလိုပါသည်။
၄။ တန်းတူ အခွင့်အရေး မရှိသော အဖိအနှိပ်ခံတို့၏ စိတ်ကူးယဉ် ထွက်ပေါက်
လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေသူချင်းအတူတူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာများထက် တစ်လုံးမက ပိုရှုနေရတဲ့ နိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် (ပသီ) များနှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ အတွက် Hypothetical (အနုမာန အခြေပြု စိတ်ကူးယဉ်) ဆောင်းပါးများရေးကာ လူငယ်များ အနာဂတ်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ (Hope) ရှင်သန် နေအောင်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အနာဂတ်မဲ့ မသွားအောင် လုပ်ဆောင်ရပါသည်။ စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်တွင် စပ်ဆိုခဲ့သော တော်လှန်ရေး မြန်မာ ကဗျာအများစုသည်လည်း အနုမာန အယူအဆကို အခြေပြုသော အတွေးများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျဘန်းစကားပြော ပြိုင်ပွဲများသည်လည်း အနုမာန အယူအဆကို အခြေခံသည့် စွမ်းရည်ကို ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသူ စစ်စစ်ဖြစ်သော ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် အနုမာန အယူအဆနှင့် ဖြေဆိုရမည့် မေးခွန်းမေးသူကို အထင်မသေးသင့်ပါ။
၅။ ပြည်သူများက တင်မြှောက်လျှင် သမ္မတ လုပ်ဝန့်သူ
နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဌတာဝန်ယူထားတာဟာ ပြည်သူတွေကသာ တင်မြှောက်ရင် သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူရဲလို့ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်မြေပေါ်မှာ အားရပါးရ ပြောခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် အတွက် အထက်ပါမေးခွန်းဟာ တကယ်တော့ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက် (Hypothetical) မေးခွန်း မဟုတ်ပါ။ မေးခွန်းရှင် ကြေနပ် သည်အထိ အနုမာန အယူအဆများကို အခြေခံကာ ဖြေကိုဖြေဆိုရမည့် (Practical) ကျသည့် မေးခွန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
၆။ လျှာစောင်းထက်သော ဒက်စမွန်တူးတူး
အမေရိကန်သမ္မတ တစ်ဦးအား အမှန်နှင့် အမှားအကြား၊ ကြား (ဂျား) နေသူဟု ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ် ဆုရှင် တောင်အာဖရိက ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်မွန်တူးတူးက စွပ်ဆွဲဘူးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မြန်မာနိုင်ငံ သည်လည်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုလက်ထက်မှစတင်ကာ လွတ်လပ်၍ တက်ကြွသော ဘက်မလိုက်သည့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ ကျင့်သုံးသည်ဟုဆိုသော်လည်း အမှန်နှင့် အမှားအကြား၊ ကြား (ဂျား) မနေသင့်ပါ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည် အမှန်များကို ထောက်ခံ၍ အမှားများကို ကန့်ကွက်ရဲရပါမည်။ မှားလို့မှားမှန်းမသိ၊ မှန်လို့မှန်မှန်း မသိသူများ လည်း ခေါင်းဆောင်နေရာမယူသင့်ပါ။
၇။ အမေစုကို နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များ ကြားတွင် Role Model ဖြစ်စေချင်သော စေတနာနှင့် ဝေဖန်ပါသည်။
တောင်ကုတ်မြို့တွင် မွတ်ဆလင်ခရီးသွား ၁၀ ဦး အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခံရမှုအတွက် Majority သည် Minority ကို ညှာတာရမည်ဟုပြောခဲ့ခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ ဒေါသမီးပိုပွားစေမှာဖြစ်လို့ ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ဘယ်ဘက်ကိုမျှ ထောက်ခံခြင်း ကန့်ကွက်ခြင်း မပြုပါဟုပြောခဲ့ခြင်းသည် လည်းကောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများကို တတိယ နိုင်ငံသို့တင်ပို့မည့်ကိစ္စကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လူသိရှင်ကြားကန့်ကွက်ခြင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားပြုမှု ဥပဒေကို နိုင်ငံတကာစံ မှီအောင် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် ပြောခဲ့ခြင်းအတွက် လည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက်မှု မှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်ပါသည်ဟု ပြောခဲ့ခြင်းအတွက် လည်းကောင်း၊ အမေစုကို များစွာ ကျေးဇူးတင်၊ အားကိုးရပါသည်။ ယ္ခုလောက် လူနည်းစု မွတ်ဆလင်များနှင့် ခရစ်ယာန်များ အတွက် မည့်သည့် ခေါင်းဆောင်မျှ မပြောဘူး သေးတာကို အသိအမှတ်ပြုပေမဲ့ အမေစုကို နိုင်ငံ တကာခေါင်းဆောင်များ ကြားတွင် Role Model ဖြစ်စေချင်၍ စေတနာဖြင့် ဝေဖန် ပါသည်။
၈။ ဗိုလ်ချုပ်သမီး အမေစု အနေဖြင့် လိုအပ်လျှင် ဗိုလ်ချုပ်လို ဒဲ့ဒိုး ပြောစေချင်။
ယေဘူယျသဘော (Generally) ခြုံငုံပြောလျှင် သက်ဆိုင်သူများ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေ တတ်ကြ၍ တစ်ခါတစ်ရံ လိုအပ်ပါက ဒဲ့ဒိုးပြောရန်လိုပါသည်။
ဥပမာ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နှစ်ဖက် အပြန်အလှန် အကြမ်းဖက်မှုများ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ လိုသည်ဟု ယေဘူယျ သဘော ပြောလျှင် ရိုဟင်ဂျာများကို အစားအစာ၊ ရိက္ခာနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ မရောင်းရလို့ ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေရဲ့ လှုံ့ဆော်ထားမှုနဲ့ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်နေမှုတို့ကို ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေပါလိမ့်မည်။
အကြမ်းဖက်မှုများ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် ကျူးလွန်သူမည်သူ့ကိုမဆို ဖမ်းဆီးပြီးထိရောက်သော အပြစ်ပေးရမည်။ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ ဝင်များကလည်း လူမျိုးဘာသာမရွေး အသက်အိုးအိမ်များကို အကာအကွယ် ပေးရမည်။ ရိုဟင်ဂျာများ စစ်တွေတွင် လွတ်လပ်စွာ ဈေးဝယ်ခွင့်ပေးရမည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီအနေဖြင့် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းမည်ဟု ပြောလျှင် ပို၍ထိရောက်ပါလိမ့်မည်။ မယုံလျှင်စမ်းကြည့် လိုက်စေချင်ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုများကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဆန့်ကျင်ပါမည်ဟုပြောသော တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး တာဝန်ခံ အမေစု အနေဖြင့် အနည်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာများ လွတ်လပ်စွာ ဈေးဝယ် ခွင့် ကိုတော့ အာမခံပေးသင့်၊ တောင်းဆိုပေးသင့်၊ လုံခြုံရေး ပေးသင့်ပါသည်။
လုံခြုံရေးတွေခွင့်မပြုဘဲ အမေစုခြံထဲကို မစ္စတာ ယက်တော မဝင်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုဘဲ ရခိုင်ပြည်က အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ တာဝန်ရှိ လုံခြုံရေးတွေ ခွင့်ပြုထားလို့သာဖြစ်တယ်လို့ Logically တစ်နည်းအားဖြင့် Hypothetically ပြောရင် အမေစုနားလည်ခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၉။ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာများ အကြား ခေတ်စားနေသော Dual Citizenship မေးခွန်း။
အမေရိကန်နိုင်ငံ နေရာတိုင်းမှာ အမေးခံရတဲ့ (Extremely Hypothetical) စိတ်ကူးယဉ်ပိုဆန်တဲ့ မေးခွန်းက (Dual Citizenship) ကိစ္စပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံမဲ့ (Stateless) ပပျောက်ရေးနဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး (Citizen Rights) အပြည့်အဝရရေးကို အရင်ဦးတည်ပြီ်း စည်းစည်းလုံးလုံး စုပေါင်း လုပ်ကြရဦးမယ်၊ ပြီးမှ Dual Citizenship ကို စဉ်းစားမယ်လို့ ဖြေတာက အမေစကားနဲ့ ပြောရရင် ပိုပြီး (Practical) ကျမယ်ထင်ပါတယ်။
ယေဘူယျသဘော စဉ်းစားကြည့်ရင် နိုင်ငံသား ပြုမှုဥပဒေမှာ Dual Citizenship ပြုခွင့် ပေးလိုက်ရင် Single Citizenship အတွက်က အလိုလိုလမ်းပွင့်သွားမယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက် လျှို့ဝှက် ညွှန်ကြားချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ရုံးက ဝန်ထမ်းတွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့စကား ကတော့ ဘာသာခြားဆိုရင် ခရိုင်ကနေတဆင့် တိုင်းအထိ တင်ပြီး အတည်ပြုရတယ် ဆိုတာပါဘဲ။အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွေးရာပါ နိုင်ငံသား များ နိုင်ငံသားကဒ် လျှောက် ထားရာမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရရဲ့အဆက်ဆက်ရဲ့လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှု အတွက် နှစ်ရှည်လများ ဝင်ခဲ့ရတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင် သူ ဒေသခံ တွေအချင်းချင်းကြား လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ ရှိနေတာဟာ အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်က ရခိုင်က အပြန် မှတ်ချက်ပေးဘူးတယ်။
နဝတ၊ နအဖ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို ဥရောပ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ ပိတ်ထားခြင်းဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ယ္ခင် ဝန်ကြီးချုပ် ဘဝက ပြောခဲ့တဲ့ လက်ရှိသမ္မတကြီးခေတ်မှာလည်း မှတ်ပုံတင် လျှောက်လို့မရသူ၊ Passport လျှောက်လို့ မရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးမို့ Dual Citizenship ကို အသာထားလို့ Citizen Right ကို ဦးစားပေးကြပါ ကွယ်တို့ ……. လို့သာ မွန်းကြပ်နေတဲ့ရင် ချောင်သွားအောင် အော်လိုက်ချင်ပါသည်။
၁၀။ အမှန်တရား အတွက် အမုန်းခံရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၀ ဝန်းကျင်ခန့်က အမေစုဟာ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်သူလို့ ပြောလို့ စစ်တပ်က တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးနဲ့ ကျွန်တော် ငြင်းခုံရင်း အခြေအတင် စကားပြောခဲ့ရပြီး အမှန်တရားအတွက် NLD ပါတီဝင် မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အမေစု ဘက်က အမုန်းခံ ရပ်တည်ခဲ့ဘူးတယ်။
ဒါကိုသိလို့ နိုင်ငံရေးနှံစပ်တဲ့ ဆန်စက်ပိုင်တစ်ဦးက ဦးနုနဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ကို သီးခြားစီ ထောက်ခံတဲ့ အုပ်စုတွေ အချင်းချင်း အောက်ခြေမှာ မတဲ့ကြပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်က တွေ့လိုက်ရင် (အစ်ကိုကြီး၊ ညီလေး) ဆိုပြီး ပုခုံးဖက်နေကြတာ။ အချိန်တန်လို့ စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ ဒေါ်စု (ညီမလေး၊ အစ်ကိုကြီး) ဖြစ်သွားရင် ဆရာနဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် မကြည့်နိုင်ဖြစ်တာသာ အဖတ်တင် ကျန်ခဲ့ မယ်လို့ သတိပေးခဲ့ဘူး ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဆန်စက်ပိုင်ထောက်ပြတာ မှန်လိုက်ပုံက သမ္မတကြီးနဲ့ အမေစု ၄-၅ ကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးသည့်တိုင် ကျွန်တော့်ရဲ့ Client ဖြစ်တဲ့ ထိုတပ်ကြပ်ကြီးမိသားစုဟာ အဲဒီနေ့ကစလို့ ယနေ့တိုင် ကျွန်တော့်ဆေးခန်းကို မလာတော့ပါဘူးခင်ဗျား။
နိုဘယ်ဆုရှင် အမေစုအနေဖြင့် အမှားနှင့် အမှန်အကြား၊ ကြား (ဂျား) မနေဘဲ မှန်တဲ့ဘက်က အမြဲရပ်တည်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း နိဂုဏ်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။
This entry was posted on October 7, 2012, in အထူးကဏ္ဍ, အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်၊ ဘင်္ဂလီရခိုင် အေးချမ်းထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ဓါတ်ပုံ- လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် ဘင်္ဂလီရခိုင် အေးချမ်း
မှတ်ချက်။ ။ ၂၃-၂-၁၉၇၃ ခုနှစ်ထုတ် ဗိုလ်တထောင် သတင်းစာပါ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ၁၄၃ မျိုးစာရင်း(မဆလအစိုးရခေတ်)ကို အောက်မှာ ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ၁၄၃ စုရှိကြောင်း ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာက ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အတွက် ဆရာဦးအောင်ဒင်ပြောတဲ့ ၁၄၄ မျိုးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်စရာ လုံးဝ မရှိပါ။ ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်လိုသူများ ဆရာဦးအောင်ဒင် ညွှန်းဆိုတဲ့အတိုင်း လိုက်လံရှာဖွေ ကြည့်ရှုလေ့လာကြပါရန်။ (ရိုဟင်ဂျာအသံ)
၂။ ကိုးကန့် (တရုပ်လူမျိုးစစ်စစ်)တွေကို ဌာနေတိုင်းရင်းသားအဖြစ် အိန္ဒိယမှာမွေးတဲ့ မျက်နှာဖြူ ဗိုလ်မှူး C. M. Enriguez က ရေးထားတယ်လို့ ဆရာ ကိုးကားပါတယ်။ ပညာရှင်တွေပြောတိုင်း တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တိုင်းရင်းသားပါဆိုတဲ့ ပညာရှင်တွေလည်း ရှိပါတယ်ဆရာ။ ပိုပြီးရှုပ်ထွေးစေမဲ့ အဲဒီဖက်ကို ကျနော်တို့ မသွားချင်ပါဘူး။ ကျနော်ရေးခဲ့တာက မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်က တရုပ်တွေဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားသားပါဆိုပြီး ကိုးကန့်ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံခဲ့တာကိုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ပညာရှင် အကြောင်းမှ မပါပါဘူး။ အကယ်၍ နဝတ မတိုင်မီ မြန်မာအစိုးရတစ်ခုခုက ကိုးကန့်ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အထောက်အထားရှိရင် ဆရာထောက်ပြပါ။
အောင်တင်ဇူလိုင် (၆) ၂၀၁၂
From: Myo Min To: 8888 Peoplepower Sent: Friday, July 6, 2012 3:33:25 AMSubject: [8888peoplepower] Fw: FYI
How do you dare to challenge with these questions? I agree that the SLOC’s list of the ethnic group is actually not correct. It is clearly an exaggeration. However, it contains all the original nationalities of Burma. You exaggerated again to 144 ethnic groups. Let me know on> which source materials do you rely for information? According to C. M. Enriquez’s book, Races of Burma, Manager of Publication, Delhi, 1933, there are three ethno-linguistic family in Burma, namely Mon-Khamer, Tibeto-Burman and Tai-Chinese. There are six ethnic groups in Mon-Khmer Group, sixteen in Tibeto-Burman and6in Tai-Chinese. Purposely he did not categorize the Dhanu, Inthar, Taungyoe and Tavoyan who speak different Burmese dialects as separate ethnicities. Kuki, Lushai and Asho also speak different Chin dialect. Zomi was not in extinct because Chin are there in Chin State. The Northern Chin like themselves to be called Zomi. As you have said the Burmese government recognized the Kokang as nationality of Burma. But it was not because the military-backed government was afraid of the Chinese dragon. The Kokang were listed in the list of nationalities of Burma by the British. C. M. Enriquez writes:
This entry was posted on September 26, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
ပြည်ပြေးရခိုင်အမျိုးသမီး စောမြရာဇာလင်းထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Source: Rohingya Blogger
ရည်ညွှန်းချက်။ ။စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်(၁၈.၉.၁၂) စာမျက်နှာ(၇) ဖော်ပြပါ အမေးအဖြေအကြောင်းအရာများ။
ဓါတ်ပုံ။ ။ ဒီဗွီဘီ
နိုင်ငံတကာတွင် လိမ်ညာလှည့်ဖြား၍ ငွေကြေး၊ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များ စုဆောင်းကာ
အကြမ်းဖက်လက်နက်ခိုင် ရခိုင်များကို ထောက်ပံ့နေသော အကြမ်းဖက်အမျိုးသမီး စောမြရာဇာလင်း
ခင်ဗျားကို ကျုပ်တို့မသိပါဘူး…ကြားလဲမကြားဘူးဘူး…..ခင်ဗျားက”အမေစု”မှမဟုတ်တာ…..ခင်ဗျားကို စသတိထားမိတာ အင်တာနက်မှာ ခင်ဗျား အမေစုကို ဆဲတဲ့ပိုစတာကိုင်းပြီး ပြန်လာတာကိုဖော်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်းမှာ စတွေ့ခဲ့တာ……အဲ့ဒီကတည်းကစပြီး ခင်ဗျားကို သတိထားမိတယ်…..ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားရဲ့ ရခိုင်ပီသမှုကို သတိပြုမိလို့ပါပဲ…ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တွေက စရိုက်ကြမ်းတယ်၊ကိုယ်ကြမ်းနှုတ်ကြမ်းတွေ၊ အတ္တကြီးတယ်၊ လောဘကြီးတယ်၊ စေးနှဲတွန့်တိုတယ်၊ မနာလိုဝန်တိုမှုများတယ် ဆိုတာ ခင်ဗျားကိုင်လာတဲ့ ပိုစတာက သက်သေ ခံနေ တယ်…..ရခိုင်နဲ့မြွေပွေးဆိုတဲ့စကားဟာ ရှေးလူကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားပဲ…..
“အမေစု” ကိုခင်ဗျားခြေရာခြင်း တိုင်းရအောင် အမေစုနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ခင်ဗျားက ဘာတန်ဖိုးမှ ရှိတာ မဟုတ် ဘူး….အမေစုက ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေ မြန်မာ့ပြည်သူတွေ တစ်ရပ်လုံးက လေးစားအားထားရတဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ခင်ဗျားမှာ စော်ကားပိုင်ခွင့်မရှိဘူး…..အမေစုကို စော်ကားတာ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကိုစော်ကားတာဘဲ…..ဒါဟာ ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တွေရဲ့အကျင့်ပဲ…….
ခင်ဗျားကကော ကုလားပြည်မှာမွေးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ယုထားတာဘဲ………ရခိုင်မှာနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို ဖိနှိပ်၊ နှိပ်စက်ခြင်းတိုင်းနှိပ်စက်၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာတွေကို အားပေးအား မြှောက်ပြုနေပြီး ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က အစ္စလာမ်နိုင်ငံတစ်ခုမှာ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့် အ၀ခံ စားပြီး ခင်ဗျားယောက်ျားရဲ့ညီမဆိုရင် အမတ်တောင်လုပ်နေသေးတယ်၊ အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားက အခွင့် အရေး အပြည့် အ၀ခံစားပြီး နိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ပြည်ပြေးလုပ်စားနေတယ်…..
ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တွေ ဆန်တတ်နိုင်ရင်ဆန်၊ဆန်ကွဲတတ်နိုင်ရင်ဆန်ကွဲလှူတယ်ပြောတယ်…ဟုတ်မှလဲလုပ်ပါဆရာမကြီးရယ်……ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တွေအကြောင်း ကျုပ်တို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်….အိမ်ရှေ့ကိုတောင်းရမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ရောက်လာရင်တောင် “လားလီ, လားလီ” ဆိုပြီးခွေးမောင်းသလိုမောင်းထုတ်တာ ကျုပ်တို့မျက်စိနဲ့တပ်အပ်မြင်ခဲ့ဘူးပါတယ်….
တောင်ကုတ်လူသတ်မှုကလည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့စရိုက်ကို သက်သေပြနေတယ်….ယုံချင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ခက်တယ်….ပတမဆုံးနယ်ချဲ့ကိုခေါ်လာတာ ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တွေဘဲ…. တောင်ငူဘုရင် နတ် သျှင်နောင် ကို လာ တိုက်ပြီး သံလျင်မှာ ငဇင်ကာကို ထားခဲ့တာလေ ….အဲ့ဒီ့အချိန် တည်းက မွတ်စလင် စစ်သား ၃၀၀၀ ပါလာတယ်…သာလွန်မင်းက စစ်သုံ့ပန် အဖြစ်ဖမ်းပြီး အထက်ဗမာပြည်မှာ နေရာချထားပေး ခဲ့တယ်..ခိုးဝင် တာမဟုတ်ဘူး…အဲ့ဒီ့ကတည်းက တရား ၀င်ရောက်နေ တာ…သမိုင်းကို လိမ်ဖို့မ ကြိုးစားပါနဲ့……..
ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ကို ဘင်္ဂါလီခိုးဝင်တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာနေခဲ့တာပဲ….ခင်ဗျားအမေ လင်တွေ ကိုပြတ်ပြတ်သားသားပြောပြီးပြန်ခေါ်ခိုင်းပေ့ါ…ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ပါးစပ်ပိတ်နေခဲ့တာလဲ?
အေးမောင်ပြောတော့ ရခိုင်တစ်သန်းလောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှာ ရှိတယ်ပြော တယ်…..ခင်ဗျားတို့ လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ခိုးဝင်သွားတာလား?
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာရှိတဲ့ ရခိုင်တစ်သန်းနဲ့ ရခိုင်မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတစ်သန်းလဲလိုက်ပါလား….ခင်ဗျားမှာ အရည် အချင်းရှိရင်လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့….
ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင် ခင်ဗျားရွာကိုခင်ဗျားတကယ်ချစ်ရင် ခင်ဗျားရွာမှာ ကျောင်းဆရာမပြန် လုပ်ပါ လား….ခင်ဗျားရွာကကလေးတွေကိုစာသင်ပေးပါလား…..ခင်ဗျားတောင် ခင်ဗျားရွာမှာ အကျိုးမပြုဘဲ ကိုယ် လွတ်ရုန်းပြေးတာ ဘယ်သူကခင်ဗျားရွာကိုလာပြီး လုပ်ပေးရမှာလဲ?
ကုလားပြည်မှာနေ ကုလားရေသောက် ကုလားဟာစားနေပြီး နိုင်ငံတော်ကို ကြည်ပြေးလုပ်ပြီး တော်လှန် ပုန်ကန်လုပ်စားနေတာ ကျုပ်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်….
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက လူဦးရေများပေမယ့် လူထုကိုအရမ်းဂရုစိုက်တယ်၊ပုလိပ်တွေဆိုရင်လည်း အရမ်း ဂရုစိုက် တယ်လို့ခင်ဗျားပြောတယ်၊ခင်ဗျားတို့ကတော့ ဘာသာခြားလူနည်းစုတွေကို နှိပ်စက်တယ်၊လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တယ်၊ကင်တားနားအစီအရင်ခံစာဟာ ဘက်လိုက်တယ်လို့ မပြောဘဲ လုံးဝမှား တယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ပြောရဲလား?ခင်ဗျားတို့မရှက်ဘူးလား?
This entry was posted on September 23, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment
An Open Letter To Daw Aung San Suu Kyi Regarding The Rohingya Issue | Aung Aung Oo
Aung San Suu Kyi, Open letter, Rohingya News
When you wrote “ Freedom from Fear”, we were very happy and learnt many things from your writing. We admire you and your father, our national hero. Your father and you gave us advices to follow the reality and to be honest, just, and kind.
Rohingya issue became an international issue since 1970s. UN, NGOs, and all of the World leaders know it. When you said “ I don’t know Rohingya “, I was so shocked. How couldaNoble Prize Winner denyareality? Could you please let us know that based on what documents did you dare to deny Rohingya? There are hundreds of historical documents and monuments, thousands of historians including Rakhine, Bamar, and foreign scholars wrote about Arkanese Muslims, Rohingya.
If you think that Rohingya history is not reliable, and then you could better formacommission of World historians who could easily decide authenticity of Rohingya history, you shouldn’t deny its existence.
There were more than 140 ethnic groups including Rohingya in Burma. Dictator Ne Win reduced the numbers to 135 which included Kokant, and Wa, two newly recognized ethnics, in order to deprive the right of Muslims and Christains minorities. You opposed Ne Win but you would like to agree his idea. I don’t hate dictators but I hate their ideas. You don’t like the name, Myanmar instead of Burma because it was not decided in democratic way. Why do you like dictators’ decision of annihilating Rohingya who were approved by your father , second national hero U Nu, and parliament democratic government. U Nu was accused of religious person who wanted to make Burma asaBuddhist country but he didn’t deny Rohingya like racist dictators.
You wrote: It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it. Most Burmese are familiar with the four a-gati, the four kinds of corruption. Chanda-gati, corruption induced by desire,is deviation from the right path in pursuit of bribes or for the sake of those one loves. Dosagati is taking the wrong path to spite those against whom one bears ill will, and moga-gati is aberration due to ignorance. But perhaps the worst of the four isbhaya-gati, for not only does bhaya, fear, stifle and slowly destroy all sense of right and wrong, it so often lies at the root of the other three kinds of corruption. Just as chanda-gati, when not the result of sheer avarice, can be caused by fear of want or fear of losing the goodwill of those one loves, so fear of being surpassed, humiliated or injured in some way can provide the impetus for ill will. And it would be difficult to dispel ignorance unless there is freedom to pursue the truth unfettered by fear. With so closearelationship between fear and corruption it is little
You encouraged us not to be fear but why do you have fear now. Isn’t it for losing power by getting vote in the next election? Or could you please tell us the reason for denial of reality?
You wrote very beautifully regarding human right: In an age when immense technological advances have created lethal weapons which could be, and are, used by the powerful and the unprincipled to dominate the weak and the helpless, there isacompelling need foracloser relationship between politics and ethics at both the national and international levels. The Universal Declaration of Human Rights of the United Nations proclaims that ‘every individual and every organ of society’ should strive to promote the basic rights and freedoms to which all human beings regardless of race, nationality or religion are entitled. But as long as there are governments whose authority is founded on coercion rather than on the mandate of the people, and interest groups which place short-term profits above long-term peace and prosperity, concerted international action to protect and promote human rights will remain at bestapartially realized struggle. There will continue to be arenas of struggle where victims of oppression have to draw on their own inner resources to defend their inalienable rights as members of the human family.
Don’t you feel that Rohingya are also human being like you? Do you want to implement neo-racism in Burma? I attached you some statements of Rohingya raped victims, I was informed 500 rape cases. I have hundreds of photo and video evidences which are against human rights.
You wrote: Withinasystem which denies the existence of basic human rights, fear tends to be the order of the day. Fear of imprisonment, fear of torture, fear of death, fear of losing friends, family, property or means of livelihood, fear of poverty, fear of isolation, fear of failure. A most insidious form of fear is that which masquerades as common sense or even wisdom, condemning as foolish, reckless, insignificant or futile the small, daily acts of courage which help to preserve man’s self-respect and inherent human dignity. It is not easy forapeople conditioned by fear under the iron rule of the principle that might is right to free themselves from the enervating miasma of fear. Yet even under the most crushing state machinery courage rises up again and again, for fear is not the natural state of civilized man.
You know the condition of iron rule but you don’t want to be practical regarding Rohingya issue, why? Could you please tell us the reason?
When I met Burmese migrant workers and refugees during my recent visit to Thailand, many cried out: “Don’t forget us!” They meant: “don’t forget our plight, don’t forget to do what you can to help us, don’t forget we also belong to your world.” When the Nobel Committee awarded the Peace Prize to me they were recognizing that the oppressed and the isolated in Burma were alsoapart of the world, they were recognizing the oneness of humanity. So for me receiving the Nobel Peace Prize means personally extending my concerns for democracy and human rights beyond national borders. The Nobel Peace Prize opened upadoor in my heart.
Everyday people are dying in the Rohingya Camps, most of them died lack of health care; pregnant women, children, and aged people. Today, Fathawli, 26, daughter of Abul Kalam from Thechaung Camp died during the delivery, both mother and baby died. There is no medication in Muslim Camps. If you look Buddhist Rakhine so called Camp , you can see doctors, nurses, and medicine store. Where have your voices of human rights gone? Why are you so silent? Who forced you to close your mouth? Isn’t it fear?
Every human being hasaright givinganame to his or her child. Every group hasaright to give its own name even according to 2008 Myanmar law. Concerning Rohingya, you don’t want to recognize their name and you don’t like restoring their citizenship rights which was approved by the elected parliament democratic government. What is the reason for these double standards?
Politic shouldn’t beadirty game, it should beaway toward peaceful global family. Inafamily, everyone can eat according to his or her choice but no one hasaright to force eating what he or she doesn’t like, no one has right to blame or criticize.
If you haveamother’s Metta, affection, please raise your voice for us too as you do for other ethnics.
This entry was posted on September 20, 2012, in အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.	Leaveacomment